Inona no mampiavaka ny fitaovan'ny lakozia Silicone? | Jingqi
Ny fitaovana an-dakozia sy ny fitaovana fandrahoan-tsakafo ananana dia manana toetra mampiavaka azy amin'ny metaly, plastika, vita amin'ny vy na vita amin'ny hazo. Ny ankamaroan'ny vokatra silicone dia tonga amin'ny loko marevaka. Ho an'izay dia hodinihintsika ny toetrany hafa ary hojerentsika raha ilaina ny fampiasana ny kojakoja silicone.
Ny fitaovan'ny fahandroana silicone dia manana fanoherana hafanana avo. Izy io dia mahatohitra hafanana avo be (ny mpanamboatra sasany dia milaza ny fanoherana hafanana hatramin'ny 600 degre Fahrenheit). Raha mampiasa mpandefa silicone na bisikileta amin'ny fandrahoan-tsakafo ianao, dia tsy mila manahy ianao fa ho levona rehefa tsy nahy nandao azy tao anaty vilany vetivety. Tsaroako ny fampiasana ireo mpanodina hazo tsy mihetsika dia miempo rehefa atsipinao anaty menaka mafana be. Misy mihitsy aza ireo potholders silicone izay tsara ampiasaina amin'ny fivoahana ny lovia amin'ny lafaoro mafana.
Fitaovana fahandroana silicone dia miolakolaka. Izany dia noho ny toetra tsy misy porous ny silicone. Ka tsy itazana fofona na loko izany rehefa mampiasa azy io amin'ny fikolokoloana sakafo miloko lalina toa ny vokatra vita amin'ny voatabia. Efa niaina ve ianao fa sarotra ny manala ny voatavo spaghetti amin'ny spatula amin'ny fantsonao? Io koa dia amboary ny vokatra silicone hanamorana ny fanadiovana na fanasana mora kokoa. Raha ampitahaina amin'ny sotro hazo, misy porosa ary afaka mitombo ny fitomboan'ny mikraoba, ny fitaovam-pamokarana silicone dia tsy manohana ny fitomboana toy izany ka mahatonga azy ireo tsy hifandray amin'ny sakafo.
Fitaovana fahandroana silicone dia toy ny fingotra. Izany dia mahatonga azy ireo ho sariaka ny olona rehefa miresaka amin'ny vatan-kazo tsy mifatotra. Tsy afaka manimba na manimba poti-paty tsy vatan-kazo na lapoaly toy ny vongan-jaza na metaly. Io fahamailinana io dia mahatonga azy ho mahasoa toy ny spatula fingotra amin'ny fanotanana ireo mofomamy mofomamy amin'ny paty mifangaro.
Fitaovana fahandroana silicone dia tsy mampifady sy maditra. Ny silicone ambaratonga ara-tsakafo dia tena azo antoka amin'ny karazan-tsakafo rehetra. Izany dia tsy mahazaka ny sakafo na zava-pisotro na mamokatra fangaro mampidi-doza. Tsy toy ny metaly sasany izay mety mihamatotra rehefa misy asidra amina sakafo. Tsy mihetsika avy eo amin'ny tsy fahitana ny fihenan'ny hafanana be loatra. Midika izany fa mety haharitra kokoa noho ny fanaka an-dakozia hafa.